Ebe 99 nke BSF Maggot Ranch • Yurie BSF
Kpọtụrụ Anyị - Get Free BSF Maggot Cultivation Training
Banyere anyị - Nke mbụ na World nke Cultivation nke Maggots
Zụrụ ma ree Maggot
Ajụjụ Nursing Ọkpụkpụ na-akpata
Ebe nke BSG Maggot Farm na-enweghị ụcha
Chọrọ ịmara ebe nkuzi Maggot na ebe kachasị nso, nke oge a, BSF na-enweghị ọkụ n'obodo gị?
Usoro ahụ dị na kọlụm oghere dee obodo ebe ị nọ ugbu a.
Wee pịa SEARCH
Akwụkwọ Ugbu a, kpọọ Yurie BSF
Chọọ radius 10 km25 km50 km100 km200 km500 km
Ederede ndị e depụtara na usoro ihe omume ahụ ezighi ezi n'ihi enweghị ike nke nkà na ụzụ ọhụrụ.
Maka akwụkwọ ọzụzụ biko kpọtụrụ Yurie BSF 0812-2105-2808
Esi BSF Maggot Cultivation
Ot'u esi eme ka okpo
Ụzọ a ga - esi zụlite Magfot BSF iji nweta ego ere ahịa Maggot ka a na - atụle nke ọma site na ịkwadebe bred nke BSF, na - ewe ihe akọrọ akpaka.
E nwere ọtụtụ ụzọ ịmụta BSF magot cultivation, ihe kachasịkarị bụ ọmụmụ onwe onye ma ọ bụ ịkụziri onwe gị na ụzọ ndị ọzọ site na ịme ọzụzụ.
Enwekwara uzo iji muta uzo Maggot BSF site n'inwe ndi otu ma obu obodo. Usoro nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya.
Naanị họrọ otu nke kachasị mma maka "ụdị" gị. Ụfọdụ na-adịrị mfe nghọta site n'ịgụ ihe, ụfọdụ na-ahọrọ ịmụ ihe site na ilele vidio nkuzi, ụfọdụ na-ahọrọ na-arụ ọrụ na ugbo.
Usoro maka ịzụlite BSF magots n'ebe ọ bụla ị na-eme bụ nke ọma. Ọ bụrụhaala na ị ga-enwe afọ ojuju na nsonazụ. na n'ezie ihe ndị a rụpụtara ebe a nwere ike izute mkpa anụ anụ.
Maggot Business Category
Mgbe ị na-enwe ikpuru, ma e wezụga maka nri anụ ahụ nke gị, ị na-ere ere ma ọ bụrụ na e mezuru mkpa nke gị. E wezụga usoro mgbochi butf cultivation, a na-ahazi ọka nsị na-adabere n'ọtụtụ ahịa ahụ.
Ulo nke uzo Maggot Cultivation
A na-ekekọrịta oke azụmahịa nke Magot n'ime ọnụ ọgụgụ dị nta (ụlọ), ọkara na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ. Dabere na ahụmịhe ọ kachasị mma ịmalite na obere ma ọ bụ nke ụlọ, na isi obodo ahụ adịghị arọ, ihe kachasị mkpa bụ na ị ga-ebu ụzọ ghọta nsị na azụ nke BSF maggot ịkọ.
N'ime usoro mgbe a na-emepụta ihe nke atọ na nke anọ na ihe ndị ọzọ, mgbe ahụ, ịkụzi ikpuru na-atọ ụtọ ma na-arụpụta ihe.
Nwee ndidi mgbe ị na-anọ n'etiti mmụta, ọ dịghị atụ aro na ị na-eri otu ton n'ụbọchị ma ọ bụrụ na ịnwetaghị otu kg n'ụbọchị.
Ọ dị mma ịchọrọ ịghọkwu ihe ezi uche dị na ya ma gbanwee ikike nke onwe, ihe onwunwe, ihe onwunwe na ndị ọzọ na-akwado ya.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị na-amasị ịmụrụ ihe n'onwe gị, biko soro ntuziaka zuru ezu site ná mmalite ịzụ ahịa ma na-ere BXF maggot
BSF Maggot Cultivation Guide
Nduzi zuru ezu maka otu esi eme ka ikpuru
Otu esi edozi Maggot n'ime nri anụ
(Pasta Maggot, Flour Maggot, Maggot Pellet)
Ajụjụ na Azịza banyere Ike Na-azụlite
BSF Magical Marketing
Họrọ Omume Ntuzi na Nchekwa
E nwere 99 More Ebe maka Modern BSF Maggot na-enweghị ụcha
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta ihe n'ụzọ dị irè ma ozugbo, e nwere nsonaazụ. Ị nwere ike ịmụta site na ịbịa rụọ ọrụ na mpaghara ugbo na obodo kachasị gị nso. Ị na-ahọrọ obodo kacha nso ka ị mụta banyere ememme BSG na-emepụta ihe na-adịghị mma n'oge a.
Nkpuru nke uzo na nnukwu ugo
Iji malite azụmahịa na anụ ọhịa anụ ọhịa Maggot, ị ghaghị ịkwadebe ihe niile ka tozuru oke ma zube.
N'ihi na ịmalite anụ anụ na-enweghị ihe ọ bụla, ị gaghị eme ya dị ka ihe dị mfe ma na-egosipụta. Na mgbakwunye na iwepụ oge, ike na uche, n'ezie ọghọm ndị ọzọ adịghị ego.
Icheghị ụbụrụ uche maka ọdịda ga-eme ka ị ghara ịdị mma n'ọdịnihu gị. Kedu ihe ndị dị mkpa ka a mụọ ma ghọọ nchegbu anyị mgbe ịchọrọ ịzụ ahịa azụ na usoro ọkara?
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ị ga - ebu ụzọ rụọ ọrụ usoro ụlọ, ma mezie ya maka ụlọ ma ọ bụ nnukwu ọnụahịa. Nke mere na isi obodo ahụ na-aghọ isi ntọala anyị na-azụlite azụmahịa ọzọ na-azụ anụ.
Ihe ndị ọzọ dị mkpa tupu ịmalite azụmahịa nke anyị ga-eburu n'uche bụ:
Enwere ihe ihe ize ndụ, nke pụtara na ọ dị mkpa ịbụ ịdị njikere uche na nhazi atụmatụ nke zuru okè ka ego ahịa na-enweghị isi na-agba ọsọ.
Ihe ndị anyị ga-eme tupu ịmalite azụmahịa amalite
N'inwe obi ike na azụmahịa ndị na-azụ anụ na-abụ n'ezie ihe ngwọta maka ịmepụta onwe gị na ego n'ụzọ ka mma n'ọdịnihu.
Kpọkọtara isi obodo BSF maggot
Mepụta atụmatụ azụmahịa.
N'ebe a bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa dị mkpa ka a kwadebe
Na-arụ ọrụ ọnụ
Ọ bụrụ na anyị na-eme azụmahịa onwe onye ma ọ bụ nke ọ bụla, ọ dịghị mkpa ịchọta onye ọrụ azụmahịa. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta ụlọ ọrụ, ị ghaghị ịmepụta otu ọganihu.
Malite site n'ịchọ ndị nwere ike ịtụkwasị obi, rụọ ọrụ na ebe ndị ziri ezi nọ n'ebe kwesịrị ekwesị.
Lekwasị anya na ịhọrọ Ụdị Ụkwa Business
Nhọrọ dị iche iche na azụ ahịa azụmahịa, na mmalite nke N'ezie, ị ga-aga n'usoro ịkwalite mmepụta koruru nke na-arụpụta nnukwu ụba buru ibu.
Maka ogologo oge, jide n'aka na ị wuru ụlọ ahịa BSF nke oge a n'enweghị isi ísì. Otu ihe gbasara azụmahịa bụ nchebe na nkasi obi nke ịgba ya ugbu a ruo ọtụtụ iri afọ.
Ọ bụrụ na mmepụta nke ikpuru gị ka na-esi ísì ọjọọ, dozie ya ka ọ ghara iwetara ndị mmadụ nsogbu. A na-emechi ọtụtụ ndị ọchụnta ego ndị na-ebutebeghị nchebe maka ngosipụta nke obodo.
Mgbe ị na-enwe ike ịzụlite ikpuru na-enweghị isi, nzọụkwụ ọzọ bụ ilekwasị anya na ọkachamara na azụmahịa maggot.
Ndị a bụ Maggot Business Derivatives Products
Organic Liquid Fatịlaịza
- Klas A Organic Liquid Fatịlaịza
- Klas B Organic Liquid Fatịlaịza
Organic Solid Fatịlaịza
Klas A Organic siri ike fatịlaịza
Klas B na-arụ ọrụ nke ọma
Ọhụrụ BSF Larvae
Maggot Animal Feed (Maggot Pasta, Maggot Flour. Maggot Pellet)
Agro Industry (Ngosiputa Ngwa, Na-edozi Ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Wụpụta Nri Ụlọ Ọrụ)
Ndị na-achịkwa Maggot
Nchịkọta Ugbo nke Maggot
Maggot Business Consultant
Lee Around Anyị
Ngwaahịa na ịzụ ahịa nwere ohere dị mma, naanị lee anya ole ụlọ ọrụ anụ ọhịa na-eri nri na gburugburu gị.
Nke a na-egosi otú nnukwu ahịa ahịa anụ ọhịa nwere ike isi gbasaa.
Họrọ ma tụọ ụdị azụmahịa ị chọrọ ịgafe, chee echiche nke ọma tupu ị kpebie. Ekwela ka anyi kpebie na anyi ezighi ezi.
Kedu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị chọrọ inye? Kedu ka e si ekesa? Kedu ka ị si azụ ya? Kedu ndị ga-agba ọsọ ya? Kedu ụgwọ ahịa ere ahịa? Kedu ka ị si akwalite ya?
Kwadebekwa otu esi eme ka nkwakọba ngwaahịa dị mma dị ka o kwere mee n'anya ndị na-azụ ahịa. Kwadebe ma kwadebe tupu ịmalite azụmahịa.
Mara Maggot Market (SWOT)
Mee nnyocha ma mee nchọpụta ahịa iji chọpụta onye ahịa gị bụ, karịsịa ndị ga-abụ ahịa maka ahịa gị.
Chọta ihe ahịa gị na echiche gị banyere azụmahịa ikpuru ị na-achọ ịmalite. Ndị na-asọmpi dị ugbu a enweghịkwa ihe dị mkpa iji kwadebe atụmatụ iji merie ahịa ahụ.
Ịhọrọ aha Business
Ahịa aha dị ezigbo mkpa na ọrụ azụmahịa. Họrọ aha nke dị mfe icheta ma na-anọchite anya mgbalị BSF.
Ebe nchekwa ego Ebee ka ego azụmahịa gị dị? Ọ si na isi obodo ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ? Ọ bụrụ na ego ị na-eme atụmatụ abụghị 100% nke ego onwe gị.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọtụrụ ọrụ ndị ọrụ nchịkwa na-enye nkwado ego dị ka:
Borrow si Bank
Na-achọ ndị investors
B borrow from family
B borrow from a friend
Na-agbazite n'aka gị
Ime Atụmatụ Business
Atụmatụ achụmnta ego bụ azụmahịa na-acha anụnụ anụnụ nke azụmahịa gị, atụmatụ, ịmepụta ọhụụ na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-eme ka ịchọrọ ịchọta ya?
Mee atụmatụ maka nkwado na ahia maka usoro nri nri dị mma iji bụrụ akụkụ nke ahịa anụahịa wdg.
Jiri nlezianya mee atụmatụ azụmahịa, nke oma ka ị ghara ime ka o sie ike mgbe ị na-ebi ya. Ya mere na azụmahịa gị doro anya banyere nduzi na nzube ya na oge mmezu ya.
Ịchọpụta ebe azụmahịa
Ọnọdụ ahịa Maggot na-achọ ebe dị mma. Chọọ ebe ndị dị mfe ịnweta njem,
Na nso ihe ndi ozo nke mgbasa ozi na nri ndi ozo, nwere ihe nkwado ndi zuru oke ma di mfe inweta oru.
Ndị na-ewebata ọrụ
Họrọ ndị ọrụ na-elekọta nlezianya. Otu ihe dị mkpa n'inweta ihe ịga nke ọma bụ ịnweta ndị ọrụ ọ bụghị nanị na ha nwere ike ịrụ ọrụ mana enwere ike ịtụkwasị ha obi.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga akụ na ụba n'ihi "onye" na ụlọ ọrụ ndị na-emebi ma na-eburu azụmahịa nke na-ebi n'aha ya.
Ijikwa Maggot Business Admits
Ahịa azụmahịa bụ akụkụ nke iwu iwu na iwu nke iwu ma gosi na ị bụ ezi nwa amaala site n'ịkwụ ụgwọ ụtụ ahịa mgbe e mesịrị.
Nkà na ụzụ nke Maggot
Mụta ma ghọta ihe ndị na-eme ka anụ ọhịa na-amalite site n'ịkwadebe ọdịdị anụ ahụ na usoro ihe omume na nke ga-eme n'ọdịnihu mgbe nchịkọta a na-agba ọsọ.
Mee Cage nke dị BSF
Ogige BSF dị ka nnụnụ na-efe efe mgbe ọ na-adanye ma na-edegharị iji mepụta nsen dị ukwuu.
BSf ịzụlite bụ ihe dị mkpa dị mkpa iji kwadoo arụ ọrụ ịkụ ọrụ BSF.
Ogwe aka nri ma họrọ BSF ga enyere aka mepụta BSF nsen ma nyere aka n'ịkwado BSF kwa ụbọchị, gụnyere ime ụlọ dịka ebe obibi nke onye agha ojii na-efe efe ma ọ bụ onye agha ojii.
Ogige BSf ga-enwe ike ịme nkasi obi maka BSF. Usoro nkwụsịtụ nke BSF kwadoro:
Ngwa BSF ngwa ngwa
Ezigbo nha (ogologo x n'obosara x elu na elu nke oghere BSF)
Maka nkọwa ndị ọzọ, lee nkuzi nkuzi na otu esi eme ya cage na-amasị mmasị onye agha ojii.
Ngwokogwu Ugbo na akụrụngwa
Ngwa na akụrụngwa dị mkpa iji kwado usoro ọsọ nke usoro ihe ubi. Ngwa na akụrụngwa dịka:
Nnweta akwa ebe,
Nri na ebe ọṅụṅụ maka BSF ijiji,
Maggot ebe sara mbara,
Egg na egg incubator
BioTong larvae ịmụba saịtị
Nri na Maggot Cultivation Media
Otu n'ime isi ebumnuche nke ịzụ anụ bụ iji nweta ego maka nri ụmụ anụmanụ ruo 82% nke ọnụahịa zuru ezu nke oriri n'oge mmepụta nke azụ azụ na ulo ozuzu okuko.
Ya mere, jiri ihe oriri na nnukwute nri dịka ihe mkpofu ụlọ, ihe mkpofu kichin, nsị ahịa na ụdị akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
Mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ike ịdị n'ụdị nsị anụ, ewu, oke bekee, ọbọgwụ, ọkụkọ quail na ịnyịnya nri.
Nri na Mgbasa ozi
Nri na mgbasa ozi nwere njikọ chiri anya na ogo na arụpụta ọrụ nke magot na ụgwọ arụmọrụ.
Nri na-ekere òkè dị ukwuu n'uto nke larvae n'ihi na nri zuru oke na-enyere aka na-eto eto ngwa ngwa ma buru ibu.
Ịzụlite oge BSF oge a na-enweghị isi na-esiri ike, ma ka na-achọ njikwa kwesịrị ekwesị. Karịsịa ma ọ bụrụ na a cultivation abụghị nanị ikpe na njehie.
BSF egg hat media nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ma na-emekarị nke obere igbe dị ka basins na trays ma ọ bụ na ụdị nke igbe igbe.
N'ebe a, a na-abanye nsen BSF na magot ma wefee ya na bioTong mmepe ...
Kwadebe ebe a na-etinye ọhụụ ma tinye ebe ị ga-etinye nkedo ahụ ma dị mfe nyochaa ma nọgide na-enwe kwa ụbọchị.
Ojiji nke BioTong na usoro ọkara dị nnọọ iche na ọnụ ọgụgụ ụlọ, ma ụkpụrụ ahụ ka dị otu ebe BioTong nwere ụdị 2, BioTong n'enweghị oghere dị ka ọkara maka ịzụlite ụmụ ikpuru na BioTong na ramp dịka ngwá ọrụ maka mwepụ.
A gbanyere ogo BioTong maka inweta ala, dozie ya n'ụzọ dị mma ma kwadebe atụmatụ imepe ma gbakwunye BioTong mgbe mkpụrụ a na-amụba.
Usoro nhazi mgbasa ozi
Ijikwa nlezianya nke nnweta oriri na ndị na-eme mkpọtụ ga-adị njikere nke ọma, n'ihi na mgbasa ozi dị n'ụdị nsị anụ, anụ ụlọ anụ ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-enwe agụụ isi ísì.
Yurie BSF - Akuku Ugbo nke Mbụ nke Na-adịghị Eke
Nweta Ọzụzụ Nchịkwa Maggot
Map saịtị - Site na Yurie BSF
© 2000-2018 FreshBooks | Kpọọ na-efu n'efu: 0812 - 2105 - 2808
Ekwentị: fax: email: